Godrogodro amin'ny voanio
Akora ilaina • Voanio 1 na tavim-boanio 50sl • Kobam-bary 1kg na 4 kapaoka • Siramamy1/2kg • Rano 8 kapoaka • Hanitra izay tiana Akora ho an’ny caramel • Siramamy 4sf
Sasana aloha ny salady, diovina tsara dia avela hitsiaka rehefa avy eo. Maka lovia jobo kely iray hikapohana ny atody ary asiana sira sy dipoavatra. Endasina amin’ny dibera, na menaka, arakarak’izay hitiavana azy. Afindra anaty lovia hafa ka ahorongorona amin’ny halavany, dieny izy mbola mafana iny. Tetehina tsy dia manify loatra. Maka lovia jobo iray asiana ny salady, ny voatabia efa notetehina efa-joro ary ny oliva nozaraina roa. Atambatra amin’ireo ilay atody voatetika teo dia rarahana “vinaigrette” amin’izay.
2. Sushi vita amin’ny atody
· Vary lava
· Rano 22 sl
· Vinaingitra 5sl
· Atody 3
· Kôkômbra 1
· Saumon 150g (any amin’ny grandes surfaces)
· Saosy soja 5sl
Andrahoina ny vary fa tsy hatao masaka loatra. Endasina ihany koa ny atody, saingy tsy avadika akory fa atao masaka tsara fotsiny. Tetehina madinika sy lavalava ny kôkômbra ary atao toy izay koa ny trondro sy ny voatabia. Rehefa hanamboatra azy dia mila ireny tsihy natokana hamehezana “sushi” ireny. Raha toa ka tsy mahita dia afaka mampiasa “film alimentaire”. Apetraka eo ambonin’ilay tsihy kely, na ilay “film alimentaire” ny atody dia apetraka eo amboniny ny vary sy trondro ary ny voatabia. Aparitaka mba hahazo ny velaran’ilay atody. Ahorongorona amin’izay ilay tsihy, na ilay “film”, ka fehezina mafy tsara mba tsy hivoraka. Tetehina araka ny habeny izay ilaina. Aroso miaraka amin’ny saosy soja na saosy hafa, araka izay tiana.